Semalt Inozivisa IWeb Best Web Crawler Tools Kuti Scrape Websites
Kwenyuka kweWebhu, inowanzoonekwa sekutsvaga webhu, ndiyo nzira kana automated script kana purogiramu inotarisa mumatare nenzira inonzwisisika uye inonzwisisika, inotarisa data itsva uye iripo. Kazhinji, ruzivo rwatinoda runovhara mukati memabhulogi kana webhusaiti. Kunyange zvazvo dzimwe nzvimbo dzichiita kuedza kuisa dhidhiyo mumarongerwo akavakwa, akarongeka uye akachena, vazhinji vavo vanokundikana kuita kudaro. Dhiyabhorosi inokambaira, kushandura, kupora, uye kuchenesa zvinodikanwa mubhizinesi rekuInternet. Iwe unofanirwa kuunganidza ruzivo kubva kune dzimwe nzvimbo uye uzvichengetedze mune zvinyorwa zvinyorwa zvezvinangwa zvebhizimisi - para que sirve un blog fotografico. Nokukurumidza kana kuti gare gare, iwe uchafanirwa kupfurikidza nemaforumsani emunharaunda uye munharaunda kuti uwane ruzivo rwezvirongwa zvakasiyana-siyana, zvigadziriswa, uye software yekutora data kubva panzvimbo.
Cyotek WebCopy nderimwe remhando dzakanakisisa dze web web scrapers nevanokambaira paIndaneti. Inonyatsozivikanwa neyo-web-based, user-friendly interface uye inoita kuti zvive nyore kwatiri kuchengetedza nhamba yezviwenga zvakawanda. Uyezve, iyi purogiramu yakawedzera uye inouya ne multiple backend databases. Iyo inozivikanwawo nokuda kwemashoko ayo mapepa ekutsigira uye zvinhu zvinobatsira. Purogiramu inogona kuedza zvakare nyore mapeji epaIndaneti, inokamba mawebhusayithi kana mablogi nezera uye inoita mabasa akasiyana siyana. Cyotek WebCopy inongoda zviviri kana zvitatu kuchitsvaga kuitira kuti basa rako riitike uye inogona kukwidza data yako nyore nyore. Iwe unogona kushandisa shanduri iyi mumafomu akaparadzirwa nevanokambaira vakawanda vanoshanda panguva imwe chete. Iyo inobvumirwa neApache 2 uye inosimbiswa neGitHub..
Kana iwe uchinzwa kuti iwe web-yakwezva iwe inofanirwa kuva isina nyore uye yakasiyana, unofanira kuedza purogiramu iyi nekukurumidza. Ichaita kuti kukwidza kunyore nyore uye nyore. Chinhu chimwe chete chaunofanira kuita ndechekudarika mabhokisi mashomanana uye kupinda URL dzechido. HTTrack iri mvumo pasi peMIT license.
Octoparse ine simba web scraping tool inotsigirwa nevekushanda kwevashanduri vewebhu uye inokubatsira kuvaka bhizinesi rako zvakanaka. Uyezve, inogona kutengesa marudzi ose e data, kuunganidza uye kuichengeta mune zvakawanda zvakagadzirwa seCSV neJSON. Iinewo maitiro mashoma akavakwa mukati kana kushandiswa kwezvimwe mabasa ane chokuita nekugadzirisa kwekuki, user agent agent spoofs, uye zvigadziriswa crawlers. Octoparse inopa ruzivo rwemaAPIs ayo kuvaka zvinyorwa zvako.
Kana iwe usinganzwisisiki nemapurogiramu aya nekuda kwezvinetso zvavo zvekunyoresa, unogona kuedza Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser, uye mamwe matanho akafanana. Munzira ipi neipi, Getleft imwe yezvigadzirwa zvine simba rine zvakawanda zvezvasarudzo nezvimwe. Kushandisa iyo, haufaniri kuva nyanzvi yeFPP uye HTML nhamba. Ichi chishandiso chichaita kuti webhuhu yako inyore nzira isiri nyore uye irikurumidza kupfuura mamwe mapurogiramu emagariro. Inoshanda zvakanaka mu browser uye inoita XPaths maduku-duku uye inotsanangura ma URL kuitira kuti iite zvakanaka. Dzimwe nguva chigadzirwa ichi chinogona kubatanidzwa nemapurogiramu ekutanga emhando yakadaro.